Kismaayo News » Kenya oo Odinga isku caano shubay
Kenya oo Odinga isku caano shubay
Kn: Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa maanta fagaaraha Uhuru Park ee bartamaha magaalada Nairobi isku caano shubay.
Odinga oo ay u soo banbaxeen kumannaan taageerayaasha xisbigiisa ah ayaa loo dhaariyay inuu yahay madaxweynaha xaqa ah ee dalka Kenya. Odinga oo mar labaad looga guulaystay doorashadii ku celiska ahayd ee bishii Octobar 2017 ka dhacday Kenya ayaa diiday inuu Uhuru Kenyata u aqoonsado madaxweyne taasi badalkeedana maanta ayuu isku boqray.
Magaalada Nairobi iyo guud ahaa dalka Kenya ayaa mar kale laga cabsi qabaa inay ka dhacaan rabshado galaafta naf iyo maal badan, waxaana heegan ku jira ciidamada amaanka iyo kuwa milatariga. Cabdisada ugu badan ayaa ah in ciidamada laftoodu ay qaarkood la saftaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka taasi oo sii murjin karta xaaladda amaan ee dalka.
Xafladdii caleemo saarka ee Odinga isku caano shubay ayaa waxaa ka maqnaa inta badan hogaamiyeyaasha Odinga ku weheliyay maamulka xisbiga mucaaradka. Xaaladda Kenya ayaa u muuqata mid foolanaysa, waxaanse la ogayn waxa ay dhali doonto, waxaase hubaal ah hadii qalelaasaha siyaasadeed aysan degdeg u soo afjarin inay arintu fanan doonto meel ay adag tahay in laga soo celiyo.